लभ-रोमान्सः तपाईहरुको प्रेम सम्बन्ध टुट्ने त होइन ? – आफ्नो प्रेरक संसार
Bibas chetan — १८ मंसिर २०७५, मंगलवार ११:०१0comment
मंसिर १७,२०७५ वैंशालु माया पिरतीमा सधै मिठास मात्र आउँदैन । बेलाबखत नसोचेको मोड पनि आइदिन्छ । अनायसै प्रेमी/प्रेमिकाको मन बद्लिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ?
विकल्प अनेक हुनसक्छन् । किनभने वैंशालु प्रेमको रुपरंग एकनास हुँदैन । कोही क्षणिक मोजमस्तीका लागि प्रेम गर्छन् । कोही देखासेखीमा प्रेम गर्छन् । कोही दिगो प्रेम गर्छन् । कति प्रेमिल जोडीलाई लाग्छ, ‘प्रेम भनेको उमेरमा गरिने रमाइलो हो ।’ कति मायालु जोडी ठान्छन्, ‘प्रेम भनेको अमर हुनुपर्छ ।’
जे-जसरी गाँसिएको प्रेम सम्बन्ध भएपनि त्यसलाई थप रसिलो र कसिलो बनाउका लागि दुवैमा विश्वास, समझदारी चाहिन्छ । जहाँ विश्वास हुन्न, त्यहाँ आशंका पैदा हुन्छ । जुन सम्बन्धमा आशंका पैदा हुन्छ, त्यो सम्बन्ध कुनै बखत दुई चिरा पर्न सक्छ ।
कारण जे पनि हुनसक्छ, उसले अर्कै पाटनरप्रति रुची जगाएको हुनसक्छ । आफुप्रति अविश्वास गरेको हुनसक्छ । आफ्नो मायामा कमी भएको हुनसक्छ ।
केही यस्ता व्यवहार छन् जसले आफ्नो प्रेमी/प्रेमिका आफुबाट टाढिन चाहेको संकेत गर्छन् । यस्तो भइरहेको छ भने बुझ्नुपर्छ कि अब हाम्रो सम्बन्धमा खटपट आउनेवाला छ ।
कैयौंपटक एक सानो गल्तीको कारणले सम्बन्ध खराब हुन सक्छ । तपाईंको स-साना गल्तीको कारण कैयौंपटक तपाईंको पार्टनरलाई कुनै अरु पार्टनरको आवश्यकता महसुस हुन थाल्छ ।
यदि आफ्ना प्रेमी/प्रेमिका टाढा भइरहेकी छिन् जस्तो लाग्छ भने बेलैमा उनलाई बुझ्ने प्रयास गरेर आफ्नो सम्बन्धमा सुधार ल्याउने तर्फ कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि प्रेमी/प्रेमिकाले आफ्नो फोनको पासवर्ड बारम्बार परिवर्तन गरिरहन्छन् भने सतर्क हुनुपर्ने बेला आएको छ । बुझ्नुपर्छ कि उनले केही लुकाइरहेका छन्/छिन् । तपाईलाई आफ्नो जीवनबाट टाढा बनाउन चाहन्छन् ।
२. सामाजिक रुपले सकि्रय नहुनु
यदि तपाईलाई आफ्नो प्रेमि/ काको व्यवहारमा परिवर्तन भएको महसुस भइरहेको छ भने तपाई सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता छ र आफ्नो सम्बन्धलाई बचाउनका लागि कोसिस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।